आजकाल देउता रिसाउँदैनन्, बरु खुसी छन्  HamroKatha
आजकाल देउता रिसाउँदैनन्, बरु खुसी छन्
पराजित भयो दूध बेच्दा देउता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वाश
बसन्तप्रताप सिंह, बझाङ २०७४ पुष १० गते १५:०९
दूध नबेच, दही नबेच, घिउ नबेच । देउता रिसाउँछन् । जो पायो त्यसलाई दूधदही खान नदेउ । देउता रिसाउँछन् । आम्मै, जातथर र गोत्र नसोधी दूध हालेको चिया खान दिने हो ? देउता रिसाउँछन् ।
पहिले देउता ‘रिसाँउथे’ तर आजकाल देउता रिसाउन छाडे । देउताले रीसराग त्यागेका हुन् कि ? पक्कै देउताले नीति नै परिवर्तन गरेका होलान् । दूधदही बेच्दा र सबैलाई खान दिँदा रिसाउने देउता आजकाल खुसी पो हुन्छन् । खुसी भएर दूधदही बेच्नेलाई मालामाल बनाइदिन थालेका छन् ।
नीति कसले फेर्यो ? देउताले कि मानिसले ? आउनोस् । यसबारे बझाङबझाङको विवरण पढौं:
‘मलाई पनि पहिले महिनावारी हुँदा दूधदही खायो भने देउता रिसाउँछन् भन्ने डर लाग्थ्यो,’ धनलक्ष्मी सम्झन्छिन्, ‘महीनावारी भएको बेला दूध खाएको खण्डमा देवता रिसाउने हुन् की ? गाई भैसिले दूध दिनै छोड्ने हो की भन्ने निकै चिन्ता लाग्थ्यो ।’
बझाङ तथा आसपासका जिल्लामा गोरस (दहि, दूध, मोही, घिऊ ) लाई भगवानको प्रसाद मानिन्थ्यो र अझै पनि मानिन्छ । यो प्रसाद बजारमा बेच्नु त परै जाओस् पाहुनालाई दिनु पर्दा पनि जात, गोत्र र सातपुस्ते सोधेर मात्र दिने चलन थियो बझाङ र आसपासका जिल्लामा ।
जसलाई पायो त्यसलाई गोरस दिँदा र बेच्दा देउता रिसाउँने ठानिन्थ्यो । देउता रिसाएर गाईभैंसींले दूध नदिने, दूध कम दिने, गाईभैसी विरामी पर्छ भनिन्थ्यो ।
त्यसैले बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा दूध हालेको चिया खान पाइँदैनथ्यो । महिनावारी भएको बेला छोरी मानिसले दूधदही खाँदैनथे, खान चाहे पनि खान पाउँदैनथे । किनभने देउता रिसाउँथे ।
२०४२ साल तिर कैलाश गाविसका निलगगल रोशन सिंहले ‘देउता’ लाई च्यालेन्ज गरे । उनले दूधदहीको व्यापार थाले । कृषि विकास बैङ्कबाट साना किसानका रुपमा सहुलियत ऋण लिए । त्यसपछि दूधदहीको व्यापारी बनेका थिए ।
तर, निलगगनसँग देउता कति रिसाए भन्ने कहिल्यै थाहा भएन । अँ, स्थानीय चाहिँ खुबै रिसाए । दूधदही बेचेर परम्परा विपरित काम गरेको भन्दै व्यापक सामाजिक आलोचना खेपे । सिंह भन्छन ‘मलाई त्यतिबेला अब यो पागल हुन्छ । अब यसलाई देउताले छोड्दैन भनेर खिल्ली उडाउनेहरुको संख्या नै बढी थियो ।’
उनी सम्झन्छन् ‘दलित समुदायका मानिसहरु पनि ठूला जातले बेचेको दूधदही किनेर खान हिच्किचाउँथे । दैनिक ६० लिटर जति दूध बजारमा पठाउथ्यौं । आधा जति मात्र विक्री हुन्थ्यो ।’
करिब तीन वर्ष निलगगनले देउता उर्फ स्थानीयको अन्धविश्वाशसँग टक्कर गरे तर हारे । देउतासँग होइन, खल्तीसँग चाहिँ हारे । तीन लाख रुपैयाँ घाटा लागेपछि उनले आत्मसमर्पण गरे । व्यवसाय छाडे । कतिपयलाई लाग्यो, देउताको आशिर्वाद नभएपछि घाटा लागेर व्यवसाय बन्द भयो ।
अब देउता खुसी छन्
शायद मानिसको अन्धविश्वाश देखेर होला, देउतालाई पनि सहिनसक्नु भएछ क्यार । त्यसैले परम्परागत धारणा विपरित गोरस बेच्ने र व्यापार गर्नेलाई मालामाल बनाइदिन थाले ।
‘पहिला मलाई दूध बेच्यो, अब पागल हुन्छ भन्नेहरु नै अहिले गोरस व्यवसायमा लागेका छन् । गोरसले धेरैको जीवन परिवर्तन भएको आफ्नै आँखाले देख्न पाउँदा खुसी लाग्छ,’ निलगगन भन्छन् ।
निलगगनसँग देउता कति रिसाए भन्ने कहिल्यै थाहा भएन । अँ, स्थानीय चाहिँ खुबै रिसाए । दूधदही बेचेर परम्परा विपरित काम गरेको भन्दै व्यापक सामाजिक आलोचना खेपे । सिंह भन्छन ‘मलाई त्यतिबेला अब यो पागल हुन्छ । अब यसलाई देउताले छोड्दैन भनेर खिल्ली उडाउनेहरुको संख्या नै बढी थियो ।’
बझाङमा दूध क्रान्तिका नायक भनेर चिनिन्छन् निलगगन । उनको गाउँ कैलासबाट मात्र अहिले बार्षिक एक करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको दुग्ध पदार्थ बिक्री हुन्छ । गाउँको मुख्य आयश्रोत नै दूध भएको उनी बताउँछन् ।
‘केही बर्ष अघिसम्म पनि यहाँ दूध बेच्नु पाप जस्तै मानिन्थ्यो’ दूध व्यवसाय गरिरहेकी कोटदेवलकी धनलक्ष्मी द्धालले भनिन् ‘अहिले यो अन्धविश्वाश हट्दै गएको छ । दूध बेचेर राम्रो आम्दानी गर्नेहरु हाम्रै गाउँमा पनि धेरै छन् ।’
अहिले बझाङमा दसबटा भन्दा धेरै दूध संकलन केन्द्र र डेरी संचालनमा छन । तीनवटा दुग्ध उत्पादक सहकारी छन् र अन्य स्थानीय सहकारीले पनि प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।
जयपृथ्वी नगरपालिकाको वडा नं ९ देवल गाउँकी गाई पालक सीतादेवी खड्काले जर्सी गाई पालेकी छिन् । दूध बेचेर मासिक ५० हजार सम्म कमाउँछिन् । ४२ वर्षिया सीता भन्छिन्, ‘दूध बेच्नु त के सबैलाई देखाउन समेत हुँदैन, आँखा लाग्छ भन्ने समयमा जन्मेकी हूँ । यसरी दूध बेचेरै घरबार चलाउँला भन्ने त कल्हिल्यै सोचेकी थिइनँ ।’
त्यस्तो थियो बझाङ, अहिले दुग्ध जन्य व्यवसायबाट जिल्लामा चार हजार भन्दा धेरै मानिसले रोजगारी पाएका छन् । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका प्राविधिक कर्णबहादुर खड्का भन्छन, ‘दूध बेच्नु हुँदैन भन्ने मान्यता लगभग हटिसकेको छ ।’ अहिले जिल्लामा बार्षिक चार सय ५५ मेट्रिक टन दूध उत्पादन भइरहेको उनले बताए ।
दूधले बझाङ र आसपासका जिल्लामा समृद्धि बढाएको छ । यसको अर्थ हो, देउता खुसी छन् । देउता खुसी हुनुको कारण हो, दूध बेचेर मानिस खुसी छन् । मानिस खुसी हुँदा देउता रिसाउँदैनन्, झन खुसी हुन्छन् । बल्ल सबैले यो कुरा बुझ्न थाले ।